Fironana famolavolana mailaka amin'ny 2021 | Martech Zone
Ny indostrian'ny browser dia manohy mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha miaraka amin'ny fanavaozana mahagaga. Etsy ankilany, ny mailaka dia misintona ny fivoarany ara-teknolojia ho taraiky amin'ny mailaka amin'ny fanarahana ny fenitra HTML sy CSS farany.
Izany dia nilaza fa fanamby iray izay mahatonga ny mpivarotra dizitaly hiasa mafy kokoa amin'ny fanavaozana sy famoronana amin'ny fampiasana an'ity haino aman-jery voalohany marketing ity. Taloha dia hitantsika ny fampidirana gifs, horonan-tsary, ary emojis ampiasain'ny olona hanavahana sy hanatsarana ny zavatra niainan'ny mpanjifa mailaka.
Ireo olona ao amin'ny Uplers dia namoaka ity sary ity, Fironana momba ny famolavolana mailaka 11 izay hanjaka amin'ny 2021, izay manondro ny sasany amin'ireo fanovana singa famoronana hitantsika fa miova:
Typografika sahisahy - raha toa ianao ka manaraka ny sain'ny mpamandrika ao anaty boaty miditra be olona, ​​ny fampidirana lohateny typographic sahy amin'ny sary dia mety hisarika ny sain'izy ireo.
Dark Mode - Ny rafi-piasana dia nandeha tamin'ny maody maizina mba hanamaivanana ny fihenan'ny maso sy ny fanjifana angovo azo avy amin'ny efijery mamirapiratra, noho izany dia nifindra tamin'izany lalana izany ihany koa ireo mpanjifan'ny mailaka.
Ahoana ny fikajiana ny maody maizina amin'ireo mailakao
Gradients - Raha ny fahitana azy, ny masontsika dia mazàna manaraka haino aman-jery, noho izany ny fampidirana azy ireo hitarika ny sain'ny mpamandrika mailaka dia afaka misarika ny saina bebe kokoa amin'ireo lohateny sy fiantsoana hanao hetsika.
Famolavolana fihetsem-po - Azonao atao ny manaitra ny fihetsem-po mety amin'ny alàlan'ny fampiasana ny loko sy sary. Na dia taratry ny fiadanam-po sy ny fandriam-pahalemana aza ny mena dia midika fientanam-po, fientanam-po ary fahamehana. Ny Orange dia midika famoronana, angovo ary fanavaozana. Ny mavo kosa dia azo ampiasaina hanintonana ny saina nefa tsy manome famantarana mampatahotra.
Neumorphism - Fantatra koa amin'ny hoe neo-skeuomorphism, ny neumorphism dia mampiasa ny halalin'ny halavany sy ny aloky ireo zavatra ireo nefa tsy misolo tena azy ireo loatra. Neo midika tsotra fotsiny amin'ny grika neos. Skeuomorph dia teny voaforona skeuos, midika hoe fitoeran-javatra na fitaovana, ary morphḗ, midika endrika.
Sary an-tsary 2D - Ny fampidirana endrika sy alokaloka amin'ny sary sy sary dia hijerena ny fijerinao ny fahatsapana ny mailakao sy ho tsapa amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny alàlan'ny fanehoana ireo paikady amin'ny fomba fanao. Azonao atao ny manandrana mifanohitra loko isan-karazany, gradien, tints ary lamina mba hanomezana lalindalina kokoa ny mailakao.
Sary fisaka 3D - Ny fampidirana ny refy ao amin'ny sarinao na ny sary dia mety hahatonga ny mailakao hiaina amin'ny alàlan'ny fanaovana ny drafitra hisy akony bebe kokoa. Psst… jereo ny fomba nampidiriko an'io tamin'ny sary asongadin'ity lahatsoratra ity?
Collage Phantasmagoric - Ny fanangonana sombintsombiny avy amin'ny sary samihafa ho lasa sary tokana dia manome fahatsapana tsy azo antoka amin'ny mailaka ary manetsika ny fahalianan'ny mpanjifa.
Volom-bava - Ny loko mamirapiratra sy sahisahy dia tsy ankafizin'ny mpanjifa intsony. Ny olona izao dia nifindra tamin'ny palety miloko tsy manjavozavo izay tsy tomombana amin'ny fampidirana loko fotsy, mainty, na hafa mifameno.
Fandaminana Monochrome - Betsaka ny olona mandika ny famolavolana mailaka monochrome amin'ny fampiasana mainty na fotsy. Ny marina dia azonao atao ny manandrana ity famolavolana mailaka kely indrindra ity miaraka amin'ny loko tianao rehetra.
Animations misy sary - Atambaro ny herin'ny fanoharana sy ny sarimiaina GIF. Tsy hanampy oomph maso fotsiny amin'ny mailakao izy io fa handrisika olona maro hiova fo koa.
Ity ny infographic fironana famolavolana mailaka feno, aza hadino izany tsindrio ny lahatsoratra ho an'ny traikefa feno avy amin'ireo namantsika ao Uplers.
Tags: Sary 3dSary 3dsahylokolafinyfironana famolavolana mailakafonosana mailakatypografia mailakafamolavolana fihetsem-pogradientsneo-skeuomorphismneuphormismcollage phantasmagoricmihasimbasary an-tsarympiakatra